၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ရဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ဆီမီးဖိုင်နယ် နှင့် ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်များကို အောက်ပါ မြန်မာစံတော်ချိန် များတွင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အီရန် နျူကလီးယားဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ တက်ရောက်
ဗီယင်နာ၊ ဇူလိုင် ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ဗီယင်နာတွင် ကျင်းပ သည့် အီရန်နျူကလီးယားဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲကို ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့ သည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ) နိုင်ငံခြားရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒရေးရာ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်Federica Mogheriniက သဘာပတိအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အီရန်၊ ရုရှား၊ ပြင်သစ် ၊ ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (ဆင်ဟွာ)
၇.၇.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
အင်္ဂလန် ၂ - ၀ ဆွီဒင်
ပွဲစသည်မှစ၍ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၂ ရှိ အင်္ဂလန်အသင်းက ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၄ ရှိ ဆွီဒင်အသင်းအား ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာ၊ထိရောက်သောဂိုးသွင်းခွင့်အသာများဖြင့် အနိုင်ကစားသွားခဲ့သည်။ ပထမပိုင်းမှာပင်အင်္ဂလန်က ထောင့်ကန်ဘောကိုခေါင်းတိုက်သွင်းကာ တစ်ဂိုးအသာဖြင့်ဦးဆောင်ထားခဲ့သည်။ဒုတိယပိုင်းတွင် ဆွီဒင်ကချေပဂိုးသွင်းနိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘဲ ၅၉ မိနစ်တွင် အင်္ဂလန်က ဒုတိယဂိုးကို ခေါင်းတိုက်သွင်းယူကာဆီမီးဖိုင်နယ်တက်ရောက်သွားခဲ့သည်။
ယခုပွဲအနိုင်ရသွားသော အင်္ဂလန်အသင်းက ရုရှား နှင့်ခရိုအေးရှား ပွဲတွင် နိုင်သောအသင်းနှင့် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင် ဆီမီးဖိုင်နယ်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုမြှင့်တင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆာဗီးယားနိုင်ငံ ကတိပြု
ဆိုဖီယာ၊ ဇူလိုင် ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်သည် ဆာဗီးယာနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Ana Brnabic နှင့် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်တွင် တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံ လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုမြှင့်တင်ရေး သဘောတူခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ယူကရိန်း နိုင်ငံ အစိုးရ က တရုတ် နိုင်ငံ ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီး တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း တွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် သွားလိုကြောင်း ပြောကြား
ကိယက်ဗ် ၊ ဇူလိုင် ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယူကရိန်း နိုင်ငံ အခြေခံအဆောက်အဦ ဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး Dofgan က ဇူလိုင်လ ၄ ရက် ၌ ယူကရိန်း နိုင်ငံ အနေဖြင့် ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီး တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း တွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် သွားလိုပြီး တရုတ် နိုင်ငံ နှင့် အနာဂတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တွင် ကောင်းမွန်သည့် အလားအလာ များစွာ တည်ရှိနေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
၂.၇.၂၀၁၈. ဒုတိယပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့် ပွဲစဉ်များ
၂.၇.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ဘရာဇီးလ် ၂ - ဝ မက္ကဆီကို
ပွဲစသည်မှစ၍ မက္ကဆီကိုက တိုက်စစ်ဆင်ကစားမှုများပြုလုပ်ကာ ဂိုးသွင်းခွင့်များရခဲ့သည်။ပထမပိုင်း ၂၅ မိနစ်နောက်ပိုင်းတွင်မူ မက္ကဆီကို ကစားအားကျသွားကာ ဘရာဇီးလ်က ပထမပိုင်းတွင် ဂိုးသွင်းခွင့် ၁၁ ကြိမ်အထိရခဲ့သည်။သို့သော် မက္ကဆီကို ဂိုးသမားက လက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယပိုင်းတွင်လည်းဘရာဇီးလ်ကဆက်လက်ဖိကစားနိုင်ခဲ့ကာ ၅၁ မိနစ်နှင့် ၈၈ မိနစ်တို့တွင်အနိုင်ဂိုးများသွင်းယူခဲ့သည်။ကွာတားဖိုင်နယ်ရောက်ရှိသွားခဲ့သော ဘရာဇီးလ် အသင်းက ဘယ်လ်ဂျီယမ် နှင့် ဂျပန် ပွဲတွင် နိုင်သောအသင်းနှင့် ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်များ
၁.၇.၂၀၁၈. ဒုတိယပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ခရိုအေးရှား ၁ - ၁ ဒိန်းမတ်
၃ - ၂
အုပ်စုပွဲများ၌ခြေစွမ်းပြလာသော ခရိုအေးရှားမှာ ယခုပွဲတွင်မူ
ဒိန်းမတ်အားအချိန်ပိုအထိအနိုင်မကစားနိုင်ဘဲတစ်ဂိုးစီသရေဖြစ်နေ၍ ပယ်နယ်တီဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရသည်။ ပယ်နယ်တီ ငါးလုံးစီသွင်းရာ၌ ခရိုအေးရှားက သုံးဂိုးဝင်ကာ ဒိန်းမတ်ကနှစ်လုံးသာဝင်၍ ခရိုအေးရှား ကွာတားဖိုင်နယ်သို့တက်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ခရိုအေးရှားမှာ အိမ်ရှင် ရုရှားနှင့် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်တွင် ကွာတားဖိုင်နယ်ကစားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့် ပွဲစဉ်များ
၁.၇.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ရုရှား ၁ - ၁ စပိန်
FIFA အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ကွာခြားလွန်းလှသောပြိုင်ဘက်နှစ်သင်း၏ပွဲကရင်တမမရှိလှပြီး ယခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလား၏ပထမဆုံးအချိန်ပိုကစားရသောပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ပထမပိုင်းတွင်တစ်ဂိုးစီသရေဖြစ်နေပြီးဒုတိယပိုင်း၌ စပိန်အသင်း ကပိုမိုဖိကစားနိုင်ခဲ့သော်လည်း ရုရှားအသင်း၏ ခိုင်မာသောခံစစ်ကြောင့်အနိုင်ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘဲ အချိန်ပိုကစားခဲ့ရသည်။အချိန်ပိုတွင်လည်းရုရှားဂိုးသမားနှင့် နောက်တန်း၏ကာကွယ်နိုင်မှုကြောင့် စပိန် အသင်းမှာရရှိသောအခွင့်အရေးများကို ဂိုးအဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပေ။
ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်တွင် ရုရှားအသင်းက ၄-၃ ဖြင့်နိုင်ကာ ကွာတားဖိုင်နယ်တက်သွားခဲ့သည်။
ကွာတားဖိုင်နယ်ရောက်ရှိသွားခဲ့သောရုရှားအသင်းက ခရိုအေးရှားနှင့် ဒိန်းမတ် ပွဲတွင် နိုင်သောအသင်းနှင့် ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ Yuzhno-Sakhalinsk မြို့ အရှေ့ဘက်တွင် အင်အား ၅.၆ပမာဏရှိ ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်
နယူးယောက်၊ ဇူလိုင် ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ Yuzhno-Sakhalinsk မြို့ အရှေ့ဘက် ၁၇၂ကီလိုမီတာ အကွာတွင် ဇူလိုင် ၁ရက် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၂၀း၄၅း၄၂နာရီတွင် ရစ်ချ်တာစကေး ၅.၆ပမာဏရှိ ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ဘူမိဗေဒတိုင်းတာရေး အဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။